Nahavita ny fanaraha-maso ireo patch rehetra natolotry ny University of Minnesota | Avy amin'ny Linux
Vita ny fanamarinana ho an'ireo patch rehetra natolotry ny University of Minnesota
Ny filankevitra teknikan'ny ny Linux Foundation vao haingana no namoaka tatitra natambatra momba ilay tranga mifandraika amin'ny mpikaroka avy amin'ny University of Minnesota izay nanjary fanalam-baraka, rehefa nanandrana nampiditra patch of kernel izay misy bibikely miafina izay mitarika ho marefo izy ireo.
Nanamafy ny vaovao navoaka ireo mpikaroka kernel teo aloha, tamin'ny patch 5 nomanina nandritra ny fanadihadiana «Hypocrite Commits» fanadihadiana, patch 4 miaraka amin'ny marefo no nariana avy hatrany tamin'ny fandraisana andraikitry ny mpikojakoja ary tsy niditra tao amin'ny toerana anafaran'ny voan-kernel.
Ankoatra izany, 435 ny fanamafisana no nohadihadiana, ao anatin'izany ny fanamboarana natolotry ny mpamorona avy amin'ny University of Minnesota ary tsy mifandraika amin'ny fanandramana hampiroborobo ny fahalemena miafina.
Tamin'ny 20 aprily 2021, raha jerena ny fiheverana fa vondrona iray an'ny ireo mpikaroka ao amin'ny University of Minnesota (UMN) dia nanohy ny fandefasana indray kaody manimba ny kernel Linux.
Greg Kroah-Hartman nangataka tamin'ny vondrom-piarahamonina mba hanajanona ny fanekena ny patch avy amin'ny UMN ary nanomboka a famerenana vaovao momba ny fandefasana rehetra tao amin'ny Oniversite efa nekena.
Ity tatitra ity dia mamintina ireo fisehoan-javatra izay nahatonga izany, hevitra aryny antontan-taratasy "Hypocrite Commits" izay natolotra hamoahana, ary manamarina ireo voam-bary efa fantatra teo aloha avy amin'ny mpanoratra lahatsoratra UMN izay dia nekena ho ao amin'ny tahiry loharanom-pahalalana anay. Farano ny sasany sosokevitra momba ny fomba ahafahan'ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny UMN, mihetsika
mandroso. Ireo mpandray anjara amin'ity rakitra ity dia misy mpikambana Linux
Birao Mpanolo-tsaina Teknika (TAB) an'ny Foundation, miaraka amin'ny fanampian'ny patch review an'ny
mpikambana maro hafa ao amin'ny fiarahamonina mpamorona kernel Linux.
Ary hatramin'ny 2018, ekipa mpikaroka iray ao amin'ny University of Minnesota dia navitrika tamin'ny fanitsiana ny lesoka. Ny famerenana vaovao dia tsy nanambara hetsika ratsy tao anatin'ireny fanoloran-tena ireny, fa kosa dia naneho lesoka sy lesoka tsy nahy.
ihany koa 349 ny fanamafisana dia voalaza fa marina sy tsy miova. Tao anatin'ny fanoloran-tena 39, hita ny olana mitaky fanamboarana; nofoanana ireo fanoloran-tena ireo ary hosoloina fanamboarana marina kokoa alohan'ny hamoahana ny kernel 5.13.
Ny lesoka ao Komisiona 25 no raikitra tamin'ny fanovana taty aoriana ary komisiona 12 very ny fifandraisany, satria nisy fiantraikany tamin'ny rafitra lova efa nesorina tamin'ny kernel ireo. Ny iray amin'ireo fanamafisana marina dia nofoanana tamin'ny fangatahan'ny mpanoratra. 9 fanamafisana marina no nalefa avy tamin'ny adiresy @ umn.edu taloha be talohan'ny niforonan'ny ekipa mpikaroka voadinika.
Mba hamerenanao indray ny fahatokisana ny ekipan'ny University of Minnesota sy ny fahazoana mandray anjara amin'ny fampandrosoana kernel, ny Linux Foundation dia nanolotra takiana maromaro, izay efa feno ny ankamaroany.
Ny fahazotoana dia mitaky fanaraha-maso hahafantarana hoe iza no mpanoratra nandray anjara amin'ny tetikasa fikarohana samihafa ao amin'ny UMN, fantaro ny tanjon'ny apetaho ary esory ny patsa tsy misy kilema na inona na inona fikasana. Miaraka amin'izany ny famerenana amin'ny laoniny ny lNy fahatokisan'ny vondrom-piarahamonina vondrona fikarohana dia zava-dehibe ihany koa satria izy ioIty tranga ity dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahatokisana azy roa tonta adiresy izay mety hampangatsiatsiaka ny fandraisan'ny mpikaroka anjara amin'ny kernel sy ny mivelatra.
Ohatra, ny mpikaroka dia efa nisintona ny famoahana ny "Hypocrite Commits" ary nofoanan'izy ireo ny lahateniny tao amin'ny Symposium IEEE, ankoatry ny fanambarana ampahibemaso ny fandaharam-potoana feno momba ny zava-nitranga sy ny fanomezana ny antsipirian'ny fiovana natolotra nandritra ny fanadihadiana.
Tsarovy izany Greg Kroah-Hartman, iza no tompon'andraikitra amin'ny fitazonana ny sampana miorim-paka ao amin'ny kernel Linux dia nahatsikaritra ny hetsika ary naka ny fanapahan-kevitra handà ny fanovana rehetra avy amin'ny University of Minnesota ho an'ny kernel Linux, ary avereno ireo patsa efa nekena taloha ary avereno jerena izy ireo.
Ny anton'ny fanakanana dia ny asan'ny vondrona mpikaroka izay mandinika ny mety hampiroborobo ny fahalemena miafina amin'ny kaody ny tetikasa loharano misokatra, satria ity vondrona ity dia nandefa patch izay misy hadisoana isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Vita ny fanamarinana ho an'ireo patch rehetra natolotry ny University of Minnesota